China OMASKA diaper akpa akpa na obere akpa na-agbanwe agbanwe nnukwu Unisex Baby Bags Multipurpose Travel Back Pack for Moms Papa #HS2015-2 Onye na-emepụta na Supplier | Omaska
Akpa dị nro
Akpa siri ike
Akpa ezumike ezumike
Akpa azu nke ndị agha
Akpa azu a na-eme njem
Akpa ụlọ akwụkwọ
Akpa mgbatị ahụ
Akpa akpa diaper Omaska
Akpa akpa diaper OMASKA...
Omaska ​​dipaer akpa akpa nwanyi...
OMASKA multifunctional mmiri...
Akpa OMASKA diaper nwere mpe mpe akwa na-agbanwe agbanwe nnukwu akpa ụmụaka Unisex Multipurpose Travel Back Pack maka nne nne nna #HS2015-2
Item nọmba: HS2015-2
ihe onwunwe: Oxford
Ihe mkpuchi: 210D polyester
30 PC kwa katọn, katọn size 50x60x70CM, 18.5kgs kwa katọn
OEM/ODM iji (hazie akara ngosi)
Nabata usoro SKD (Ọkara-Knocked Down).
50% T / T dị ka nkwụnye ego, itule tupu mbupu
Emebere akpa mama ma mepụta ya maka ịdị mma nke ilekọta ụmụ ọhụrụ na ụmụaka. A na-etinye ngwaahịa nke ụmụ ọhụrụ, ụmụntakịrị na ndị nne n'ime akpa ahụ iche iche iji mee ka ndị nne nwee ike ịkpọrọ ụmụ ha pụta.
Ojiji Njem / Laptọọpụ / Kwa ụbọchị / Azụmahịa Mbukota ngwaahịa (1) PP akpa + katọn (2) Enwere ike ịhazi ya
Oge ọnụahịa EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, wdg Usoro ịkwụ ụgwọ T/T, Western Union, L/C
Port nke Ibu Ibu TIANJIN, CHINA Nkọwa Mbupu Site n'oké osimiri / ikuku / ala / Express
Oge Nlereanya 1.common azu paaki: 3-9 ụbọchị Oge mmepụta mmepụta 500-1000 : 20-25 ụbọchị
1K-5K: ụbọchị 25-35
5K-30K: ụbọchị 35-45
2. mgbagwoju anya azu paaki: 9-14days > 30K: karịa ụbọchị 45
akpa azụ dị mgbagwoju anya: a ga-atụle iche
1) Top 10 R&D gbakwasara akpa azụ nwere ọgụgụ isi
2) 21 afọ emeputa raara onwe ya nye na-emepe emepe nwere ọgụgụ isi azu paaki
3) Obere MOQ iji kwado ndị ahịa ọhụrụ
4) ngwa ngwa nnyefe ASAP
Okwu Mmalite OMASKA
Nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ OMASKA: Site na ikpo okwu anyị iji mejuo ọtụtụ mmadụ na ngwaahịa anyị iji rite uru karịa ndị ahịa
Mmụọ ụlọ ọrụ:Ime ngwaahịa ọ bụla nke ọma Na-ejere ndị ahịa ozi nke ọma
Ebumnuche anyị:Ime njem dị mfe karịa ka ị bụrụ onye na-ebubata akpa & akpa
Ịre ahịa tupu:
1) Ndị otu ọkachamara na-ejere gị ozi: na-eje ozi ụlọ ọrụ 1580
1) arụmọrụ: 8 awa maka nlele na 7 ụbọchị nnyefe ngwaahịa (n'oge na-adịghị)
2) 3 ụbọchị otu update maka usoro ọganihu.
3) nzaghachi email n'ime awa 3 (oge ọrụ).
4) Mee ka samples ruo mgbe afọ juru.
5) Na-enye usoro mmepụta ihe na foto iji mee ka ị na-emelite banyere ọkwa mmepụta.
6) Ship sample maka ịlele tupu uka mmepụta.
7) N'oge nnyefe kwere nkwa.
1) 15 ụbọchị àgwà demurral oge.
2) 365 ụbọchị nkwa mgbanwe ngwaahịa.
3) Na-enye nduzi ahịa.
4) Kwa nkeji iri na ise, otu mmalite ngwaahịa.
Ajụjụ: Gịnị bụ ọnụ ọgụgụ kacha nta gị maka akpa azu?
A: MOQ bụ 600pcs / imewe, ma anyị ga-agbalị ike anyị niile iji kwado ma ọ bụrụ na-erughị 600pcs / design. Maka agba ma ọ bụ ụkpụrụ, na-ejikarị MOQ bụ 300pcs / agba (ụkpụrụ).
Ajụjụ: Kedu ụdị ozi kwesịrị inye ma ọ bụrụ na achọrọ m ọnụahịa / ntinye maka akpa azu?
A: Ọnụ ego, akara ahaziri iche na ihe ndị ọzọ chọrọ, ọnụahịa ọnụahịa (EXW, FOB, CIF wdg) na ndị ọzọ chọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere.
Q: Ị nwere ike hazie akpa azu dika ihe nlere ma obu ihe omuma nke anyi si di?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM ma ọ bụ ODM dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa si dị, anyị nwere ahụmahụ bara ụba na ọkachamara n'usoro ahaziri ahazi, n'ihi ya, anyị nwere ike zuru ezu iji hazie ngwaahịa na atụmatụ gị ma ọ bụ ihe atụ, ma nye ụfọdụ aro iji nyere aka. ụlọ ọrụ gị iji dozie ajụjụ ọkachamara ma ọ bụ nsogbu ndị metụtara ya.
Q: Kedu uru nke ụlọ ọrụ OMASKA gị na akpa azụ azụ?
A: Ngwaahịa anyị ejiri ihe nchekwa gburugburu ebe obibi mee;
Ndị otu ọkachamara nke jere ozi ụlọ ọrụ ụdị 1,250 / ndị nkesa / ndị na-ere ahịa ka ha jeere gị ozi;
8 awa nnyefe sample na 7 ụbọchị nnyefe ngwaahịa;
Na 15 afọ nke ọkachamara ahụmahụ na-emebe nwere ọgụgụ isi akpa ngwaahịa.
Ajụjụ: Anyị enweghị imewe nke anyị maka akpa azụ azụ. Ị nwere ike ịnakwere iwu ODM?
A: Ee, anyị nwere a imewe otu na ọgaranya ahụmahụ na backpacks imewe, otú anyị nwere ike na-enye ODM ọrụ dị ka ndị ahịa 'chọrọ ma ezi uche imewe na-eri maka backpacks kwesịrị ịkwụ ụgwọ.
Ajụjụ: Enwere m ike ịnweta sample akpa azụ maka nlele?
A: Ee, enweghị nsogbu. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele azụ azụ.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ịkwụ ụgwọ?
A: T/T, Western Union, L/C, Alipay, Wechat ụgwọ, O/A
Ajụjụ: Ebee ka ụlọ ọrụ OMASKA gị na akpa akpa gị dị?
A: Anyị Ụlọ ọrụ akpa akwa OMASKA Ọ dị na Baigou, China.
Nke gara aga: Ihe nlele ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ China Sports Backpack - Akara ngosi azụmaahịa dị elu 15.6 akpa azụ kọmputa nylon na-acha anụnụ anụnụ – Omaska
Osote: Akpa Omaska ​​Diaper BackpackMultifunction Waterproof Travel Back Pack maka ụmụ nwanyị#BRD262
Akpa diaper nwere mpe mpe akwa na-agbanwe agbanwe
Ngwungwu azụ njem multipurpose maka ndị nne
OMASKA hazie logo OEM HS810 Factory DIRECTL...
OMASKA hazie LOGO OEM HS810 Factory ozugbo N'ogbe Ejiji Kere BIG ikike waterproof Ntụrụndụ Backpacks Ọ a 20l azu paaki nnukwu ezuru akwụkwọ? Akpa akpa ụlọ akwụkwọ nwere ikike n'etiti lita 15 na 20 buru ibu nke ukwuu. Akpa azụ azụ ndị a bụ kọmpat, mana na-enwekarị akụkụ nke agbakwunyere iji chekwaa ihe mgbako, mkpịsị akwụkwọ na igodo. Enwekwara ọtụtụ obere akpa azu nke nwere akụkụ laptop na mbadamba. Gịnị bụ...
Akpa azụ mpịachi ọhụrụ 2020 obere Ultralight W...
Ozi ngwaahịa dị agba: Black, blue, green, oroma, isi awọ. dark.blue, l.blue Product Sizes 34*20*55CM Ibu Ibu 0.38KGS Gross Weight 0.48KGS Department unisex-adult Logo Omaska ​​ma ọ bụ ahaziri akara ngosi Ihe nlereanya nọmba RW531# MOQ 50pcs kwa agba kacha ere ahịa ọkwa 1805#, 1801 #, 8774#, 023#,1901# Akwụkwọ ikike & Nkwado Akwụkwọ ikike ngwaahịa: 1 afọ 2020 New Folding Backpack Portable Ultralight Waterproof Outdoor Multifunction Storage Folding Akpa
OMASKA 2021 Ejiji imewe n'ogbe HS2036 Mama...
Ozi ngwaahịa dị agba: ************* Ihe NO .: HS2036 # nha: 26x18x41CM NW: 0.60 KGS GW: 0.62 KGS Ngalaba: unisex-adult Logo: Omaska ​​ma ọ bụ ahaziri aha MOQ 600 pcs Best Ndị na-ere ere ọkwa HS2036# Akwụkwọ ikike & Nkwado Ngwaahịa: 1 afọ OMASKA 2021 Ejiji imewe wholesale HS2036 Mommy Baby Akpa.
Canton Fair OMASKA OEM ODM azụmahịa waterproof ...
Nha ngwaahịa 50*31*14CM Ibu ibu 0.7KGS Agba isi awọ ojii na-akwakọba otu akpa maka akpa pp, 35pcs maka otu katọn, katọn nha 50*60*70cm Logo Omaska ​​ma ọ bụ akara ahaziri nọmba 004 MOQ 100 PCS Ndị na-ere ahịa kacha mma USB Ịchaji akwụkwọ ikike nlegharị anya n'ọdụ ụgbọ mmiri & Akwụkwọ ikike ngwaahịa nkwado: otu afọ
Omaska ​​hiking azu paaki 60L nnukwu ikike mmiri ...
Kedu otu esi ahọrọ akpa azụ n'èzí? Nke mbụ, dị ka ikike ibu gị si dị (ibu ibu) ma jiri mkpa, dị ka njem njem, oge, wdg, họrọ otú nnukwu akpa azu nke ị chọrọ Mgbe ahụ enwere nhọrọ nke ọrụ: mkpuchi mmiri, mkpuchi na-eguzogide, agba, ihe onwunwe, ma nhazi nke usoro ihe eji eme ihe dị mma na ezi uche, ma ọ dị n'ime bracket, wdg. Usoro ahia eji njem njem / laptọọpụ / kwa ụbọchị / azụmahịa ngwaahịa (1) PP bag + katọn (2) nwere ike ịbụ ...
Omenala nnukwu ikike na-acha anụnụ anụnụ ebipụta polyester scho ...
Ozi ngwaahịa dị agba: Black, isi awọ, Blue Product Sizes 32 * 15 * 50CM Ibu Ibu 0.7 KGS Nnukwu ibu 0.8 KGS Ngalaba unisex- okenye Logo Omaska ​​ma ọ bụ ahaziri akara ngosi ihe nlereanya nọmba 1928# MOQ 500 PCS Best ere ahịa ọkwa 1805#, , 1811#, 8774#, 023#,1901# Akwụkwọ ikike & Nkwado Product akwụkwọ ikike: 1 afọ Omenala nnukwu ikike blue ebipụta polyester akwụkwọ laptọọpụ azu paaki